Xukumadda xilgaarsiinta:-Bannaanbax gebi ahaanba waa la joojiyay
Xukumadda Xilgaarsiinta Soomaaliya oo ku celisay markale in aan magaaladda Muqdisho ka dhici karin banaanbax lagu taageerayo amaba loogaga soo horjeedo dowlada iyadoo dhowaan ay ku baaqeen Midowga Musharaxiinta banaanbax ballaaran oo ka dhaca Muqdisho.
Siihayaha wasiirka Amniga Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaliya Xasan Xundubey Jimcaale oo shir jaraa’id maanta oo Talaado ah ku qabtay Muqdisho ayaa sheegay in shirar dhowr ah oo dhacay iyo qiimeyn la sameeyay lagu joojiyay isku soo baxyada dadweynaha, si looga feejignaado faafitaanka cudurka COVID-19.
“Xilli waxaa ku jirnaa in warbaahintu malaayiin warka ku gaarsiiso,uma baahnin banaanbax.dowlada iyo kuwa aan dowladu ku jirin ha adeegsan warbaahinta”ayuu yiri.
” Bannaanbax gebi ahaanba waa la joojiyay haddi dowladda lagu taagerayo ama haddi looga soo horjeedo intaba”. Ayuu ku yiri hadalkiisa.
Warkan kasoo baxay Xukumadda Xilgaarsiinta ayaa kusoo aadaya xilli Midowga Musharixiinta ay ku dhawaaqeen dibadbax ka dhacaya taalada Daljirka Daahson ee degmada Boondheere.
Liverpool ayaa badisay seddex
Sudden Facet Results of Ingesting Kombucha,